မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်က ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး လုပ်ဆောင်မှုများကို ကြို? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်က ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး လုပ်ဆောင်မှုများကို ကြို?
ဂျီနီဗာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇
ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဖော်ဆောင်ရန် အစိုးရက လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့ဖူးသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်က ပြဿနာရှိနေ သောဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ရန် ပူး ပေါင်းကော်မတီတစ်ခု ဖွဲ့စည်းမှုကို ကြိုဆိုလိုက်သည်။ ယန်ဟီးလီက ”ဒီကော်မတီရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုဟာ ကျွန်မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အကောင်းဘက်မှ တိုးတက်မှုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီဆီသို့ စစ်မှန်စွာ ကူးပြောင်းသွားနိုင်ဖို့ ကူညီ ပေးနိုင်မှာပါ။ ပြည်သူတွေက ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ဖို့ ဆန္ဒရှိကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေ ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ပူးပေါင်း ကော်မတီအသစ်ကို ကျွန်မအား ပေးထောက်ခံပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦး ဆောင်သည့် အာဏာရအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီက အ ပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့သည့် ၂ဝ၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်မည်ဟု ကတိပေး ပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ယခင်စစ်အစိုးရက ရေးဆွဲထားခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ မြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် တပ်မတော်အုပ်ချုပ်ရေးမှ ဒီမိုကရေစီဆီသို့ တိုင်း ပြည်က ကူးပြောင်းနိုင်စွမ်းတွင် အဓိ ကကျသည့် ယင်းခြေဥကြောင့် လွှတ် တော်၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို တပ်မ တော်ကရယူထားပြီး ပြည်ထဲရေး၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဌာနများသည် တပ်မတော် လက်အောက်တွင် ရှိသည်။
အထူးကိုယ်စားလှယ်လီက ”လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဟာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အဲ ဒီ့ခြေဥကို ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ သတ်မှတ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။